Fampiadanana sy fampanantenana :: Niantso « Fampihavanana» ny Papa, nanamafy ny “Velirano” ny Filoha • AoRaha
Fampiadanana sy fampanantenana Niantso « Fampihavanana» ny Papa, nanamafy ny “Velirano” ny Filoha
Teboka efatra no nivohitra tao anatin’ny hafatra nataon’ny Papa Ray Masina, Fransoa, ho an’ireo mpitondra fanjakana, teny Iavoloha, tamin’ny sabotsy lasa teo. Nomeny lanja manokana ny « Fihavanana » mampiavaka ny vahoaka Malagasy. Namerina ho ren-tany, ren-danitra, indrindra fa nanoloana an’ity lehiben’ny finoana katolika maneran-tany ity, ny « Velirano » hoentiny manarina sy mampandroso an’i Madagasikara kosa ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Samy ao anatin’ny tanjona hampisy fiadanana sy fanantenana ho an’ny Malagasy ireo fintin’ny lahatenin’izy mianaka teny Iavoloha ireo.
Nisongadina voalohany tamin’ny hafatry ny Papa Fransoa ny fanomezan-danja ny fanahy maha Malagasy. « Antoka amin’ny fametrahana ny soatovina malagasy sy ny fihavanana izany”, hoy izy tamin’ny kabariny. Fitaovana fototra enti-manandratra ny maha olom-pirenena sy ireo vina momba ny olombelona ao amin’ny firenena iray ny politika, araka ny nampitany tamin’ny kabariny.
“Ny andraikitra ara-politika no maniraka an’ireo mpitondra hiaro ireo mpiray tanindrazana aminy, indrindra ireo izay tena marefo, ka hanamora ny fametrahana an’ireo fepetra ho any amin’ny fivoarana mendrika sy marina”, hoy hatrany izy.
Naverimberin’ny Ray Masina ny mikasika ny fiahiana ny tontolo iainana, manoloana ny hatsaran-tarehin’i Madagasikara sy ireo harena voajanahary maro ao aminy. Manahy fahapotehan’ny firenentsika izy, tahaka ny fanondranana sy fandrobana tafahoatra an’ireo hazo sarobidy nisy teto amintsika noho ny tombontsoan’olom-bitsy. Mankahery ny fitondrana mba hiady mafy hanohitra ny kolikoly sy ny fitadiavana tombontsoa izay mampitombo ny fahasamihafana ara-tsosialy ihany koa ny Papa Fransoa. Miteraka hantsana eo amin’ny firafitry ny fiarahamonina izany, araka ny teniny.
Somary nasiaka kosa ny fanambaràna nataon’ny Papa Ray Masina momba ny fiankinan-dohan’i Madagasikara amin’ireo firenena vahiny. Nohitsiany fa “atahorana hivadika kolontsaina iambohoana ho tokana mahenika an’izao tontolo izao izany ary manandevo sy mamono ny harena ara-kolontsain’ny vahoaka”. “Tsy maintsy miezaka isika mba tsy ho lasa antoka tokana amin’ny fampandrosoana ny firenena ny fanampian’ny iraisam-pirenena”, hoy izy.
Ho an’ireo fivondronamben’ireo Eveka Katolika indray dia nazava ny toromarika nalefan’ny Ray masina fa: “tokony hahaleo tena ary haharitra amin’ny andraikitra sahaniny eo amin’ny fanampiana ny fanjakana izy ireo”. “Mety tsy ho izao dieny izao no hisian’ny vokatra fa handeha miandalana. Zava-dehibe ny fametrahana rafi-piarahamonina mirindra”, hoy izy nandritra ny fihaonany manokana tamin’ireo Eveka teny Andohalo, ny sabotsy hariva.
Teo imason’ny Papa indray no nanamafisan’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, ny fahavononany hanatanteraka an’ireo velirano imatimatesany ho an’ny vahoaka malagasy sy i Madagasikara. Tamin’ny teny feno fahasahiana no nilazany fa: “hanamafy ny fahavononany hanarina an’i Madagasikara”, ny tenany. “Hiahy ny Malagasy aho ary hihaino sy ho eo akaikin’izy ireo mandrakariva. Hanome lanja an’ireo osa ary hametraka ny kolontsain’ny tsy fanilikilihana, ny rariny, ny fitiavana ary ny fanantenana”,hoy izy.
Nahazo tehaka mirefodrefotra ny lehilahy.
Noararaotiny ny nampahafantatra fa: “henony ary fantany ny hirifiry mahazo ny Malagasy ankehitriny”. “Efa nanome toky azy ireo aho fa hitondra ho avy mamiratra ho an’ny Malagasy amin’ny heriko rehetra”, araka ny fanamby napetraky ny Filoham-pirenena.
Tetibola ho an’ny fifidianana :: Arivo sy roa alina tapitrisa ariary ihany no hoampiasain’ny CENI mivantana
Finoana arahina asa